आज मकर सङ्क्रान्ति, शुक्र अस्त भएकाले मनाउनु हुन्न भन्ने हल्ला गलत
काठमाडौँ । सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गरी उत्तरायण शुरु हुने भएकाले माघ १ गतेलाई मकर सङ्क्रान्ति भनिन्छ ।
माघे सङ्क्रान्तिदेखि साउने सङ्क्रान्तिसम्म सूर्य उत्तरको बाटो हिँड्ने भएकाले यो छ महिनाको समयलाई उत्तरायण भनिएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
गत मंसिर २९ गते पूर्वमा अस्ताएको शुक्र माघ १८ गते पश्चिमबाट उदाउने समितिले जनाएको छ । रासस
प्रकाशित : सोमबार, माघ ०१, २०७४०६:३९
उपचार खर्च तिर्न नसक्दा शव अस्पतालमै , छोराछोरी विद्यालयबाट निकालिए , कोठा छोड्न घरबेटीको उर्दी !
बलात्कार गर्नेलाई जनकारबाही , कालोमोसो र जुत्ताको माला लगाइयो, २ लाख जरिवाना !
भाइटीकाको दिन बेलुका बालिकालाई चकलेट र पैसाको प्रलोभन देखाएर बलात्कार !
थारु समुदायका भान्सामा पाक्दै गरेको दशैँको विशेष परिकार ढिक्रि, कसरि बनाईन्छ?
७ मिनेट अगाडि PS
१८ मिनेट अगाडि बिगुल
५७ मिनेट अगाडि PARWATI